ိအကြံပြုချက် တောင်းခံလိုပါတယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ိအကြံပြုချက် တောင်းခံလိုပါတယ်။
ကျုပ်ဗျာ.. အခု တလော ခေါင်းကိုက်စရာ ကိစ္စတွေချည်းပဲ ကြုံနေရတယ်။
ကျုပ် အခု ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေး နဲ့ ကြိုက်နေတာ ၆နှစ်ရှိပြီ ယူဖို့လည်း အိမ်တွေ ဘာတွေ ဝယ်ပြီး ပြီ မကြာခင် လက်ထက်တော့မှာပေါ့ဗျာ..
အခု ကောင်မလေး နဲ့ မတိုင်ခင်က ကြိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းမ တယောက် ရှိတယ်။ သူနဲ့က တက္ကသိုလ်မှာတူတူ တက်ခဲ့ကြပြီး ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ အတွဲ ကိုယ်စီနဲ့မို့ သူငယ်ချင်းတွေ ချွန်ပေးလို့ အဲဒီ မိန်းမနဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျောင်းပြီးတော့ ပြတ်သွားတယ်။ မပြတ်ခင်မှာ ကျုပ်နဲ့ ၃ခါလောက် အတူနေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ယူမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး မင်္ဂလာပွဲ တွေ စီစဉ်တဲ့ အထိ အခြေအနေမျိုးမို့ ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ ပြတ်သွားတာက တခြား မဟုတ်ဘူး ကျုပ် ကို တွေ့သမျှ မိန်းမတိုင်းနဲ့ မသင်္ကာစိတ်နဲ့ စွပ်စွဲတဲ့ စကားတွေ ပြောတဲ့ အတွက် စိတ်ပျက်လွန်းလို့ ဘဝ ခရီး ဆက်လျှောက်ဖို့ မလွယ်ဘူး လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြတ်သွားကြတာပါ။ အဲလို ပြတ်သွားတာကို သူ အိမ်ကကော ကျုပ် အိမ်က လူကြီတွေပါ သိကြပါတယ်။ သူတို့ အရှေ့မှာတင် တခါတည်း ဆုံးဖြတ်ပြီး အဖြေထုတ်ပြီး မယူဖြစ်တော့တာပါ။
အတူနေခဲ့ကြတဲ့ ကိစ္စကိုလည်း သူ မိသားစု ကလည်း သိထားပါတယ် ကျုပ်မိသားစုကလည်း သိထားပါတယ်။ သဘောထားခြင်း ညှိမရလို့ မယူဖြစ်တာကိုလည်း ဘယ်သူမှ ဘာမှ ကို မဖြစ်ကြပါဘူး။
အဲဒီ မိန်းမ ရဲ့ အမ နဲ့ ကျုပ် အမနဲ့က သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်နေတော့ ကျုပ်အမ မျက်နှာနဲ့ အိမ်မှာ အလှူတွေ ရှိရင် သူ့ အမ နဲ့ ကပ်ပြီး လိုက်လာတယ် အိမ်မှာ ကျုပ်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် မြင်ရအောင် လိုက်လာတဲ့ သဘောပေါ့။ သူတို့ကလည်း ပြန်ပြီး နီးစပ်အောင် လုပ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီ မိန်းမ အိမ်ကို လာရင် ကျုပ် အခန်းထဲက မထွက်တော့ဘူး သို့မဟုတ် အိမ်ကနေ ထွက်သွားလိုက်တယ်။
တနည်းပြောရရင်တော့ အဲဒီ မိန်းမ နဲ့ လုံးဝ မပတ်သတ်မိအောင် ရှောင်တာပါ.. အရမ်းပူလောင်လွန်းတဲ့ မိန်းမ မို့ သူနဲ့ ပတ်သတ်ရမှာကို ကြောက်နေမိတယ်။
အဲဒီ မိန်းမ နဲ့ ပြတ်တာ ၂၀၀၄ လောက်မှာ ပြတ်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား ဖြစ်နေပြီးမှ ၂၀၀၆ လောက်မှာ ကျုပ် ကောင်မလေး တယောက် ကို စတင် ချစ်ခဲ့မိတယ်။ သူကြောင့် ကျုပ်ရဲ့ ဘဝ နေထိုင်မှု ပုံစံက အစ ပြောင်းလဲ သွားစေခဲ့တယ်။ ကျုပ် ကို ကျုပ် သိတယ်.. ဒီလို ပြောင်းလဲ သွားတာ သူ့ကြောင့်ဆိုတာ.. ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အခု ၂၀၁၂ မှာ အဲဒီ ကောင်မလေး နဲ့ ယူဖို့ တော်တော် ပြည့်စုံနေပါပြီ မကြာခင် ယူဖြစ်တော့မယ်။
ဒီလိုနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာက ပြတ်ခဲ့တဲ့ မိန်းမ ကျုပ်ဆီကို ဖုန်းတွေ တချိန်ကို ဆက်ပါတယ်။ သူ ဖုန်းနံပါတ် ကို သိတော့ သူဆက်လာရင် call blocker နဲ့ ခံပြီးတော့ ထားလိုက်တော့ အဆင်ပြေတယ်။ သူ ဘယ်လိုမှ ဆက်လို့ မရဖြစ်တော့ နောက်ထပ် အကြံထုတ်ပါတယ်။ ကျုပ်နဲ့ သိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ သူနဲ့လည်း သိတယ်လေ တက္ကသိုလ် တူတူ တက်ခဲ့ကြတာ ဆိုတော့ ကျုပ်နဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဖုန်းဆက်ပြီး လျှောက်ပြောတဲ့ ဇတ်လမ်းက စ ပါတော့တယ်။ သူ့ အကြံက အခု မိန်းမယူမယ် ဆိုတာ ကြားလို့ ကျုပ်ကို သူနဲ့ပဲ ယူပါ တခြားလူနဲ့ မယူပါနဲ့ ဆိုတာ ပြောဖို့ အတွက်ပါ။ တခြားသော မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေကို ကျုပ်နဲ့ ဖြစ်ဖူးလို့ သူကို မဖြစ်မနေယူရပါမယ် လျှောက်ပြောပါတယ်။ တကယ်တမ်း တွက်ကြည့်မယ် ဆိုရင် ပြတ်တာတောင် ၈ နှစ်ကျော်နေပါပြီ။ သူနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တာလည်း ၈နှစ်ကျော်က ကိစ္စတွေပါ။ ဒီကိစ္စတွေကို ကျုပ် ကလည်း အခု ယူမဲ့ မိန်းကလေးကိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောထားပြီးသားမို့ သူလည်း သိရှိထားပြီး ဖြစ်သလို နားလည်း နားလည် ပေးထားပါတယ်။
ကျုပ် ဘာပြောပြော သူလက်ခံ ယုံကြည်ပေးနေတတ်လို့ ကျုပ် သူကို မဟုတ်တာ မမှန်တာ ကွယ်ရာမှာတောင် မလုပ်ရက်ခဲ့တာ အမှန်ပါ။ ကျုပ် ပြောပြလိုက်တော့လည်း သူ နည်း နားလည်ပေးလို့ စိတ်တော့ အေးရပေမဲ့ ကျုပ် ကို ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ဖိအားပေးပြိး အဲဒီမိန်းမ က ယူဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ အကျပ်ကိုင်ချင်တာပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း အဲဒီ မိန်းမ ကို လုံးဝ လက်မခံတော့ပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်သူကိုမှ အရှက်မရှိ ဖိအားပေး လျှောက်ပြောလည်း ဘယ်သူမှ သူ့ဘက်က မရပ်တည်ကြတော့ပါဘူး။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် သူ အမကတောင် သူ့ဘက်က မရပ်တည် သလို သူကို လက်လျော့ဖို့ ပြောနေကြပါပြီ။ အဲဒါလည်း လက်မလျော့တဲ့ အပြင် ကျုပ် ကောင်မလေးကို ဖုန်းဆက်ဖို့ ကြိုးစားလာပါတယ်။ သူဆက်တိုက် နှောက်ယှက်တာ ကျုပ် ဖုန်း ဘလော့ လုပ်ပြီး တားဆီးယုံနဲ့ ဘာမှ ပြသနာ မရှိပေမဲ့ ကျုပ် သိပ်ချစ်ရတဲ့ မိန်းကလေး ကိုတော့ ဒီလို နှောက်ယှက်တာမျိုးကိုတော့ လုံးဝ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။
အခု စကားတွေက ကျုပ် မိန်းမယူမယ်ဆိုရင် ၂ယောက်လုံးပါ ယူရမယ် ဆိုပြီး ပြောလာပြန်တယ်။ အဲဒီ မိန်းမ နဲ့ လုံးဝ မပတ်သတ်ချင်ပါဘူး။ ကျုပ် ကောင်မလေး ကို နှောက်ယှက်တာကိုလည်း လုံးဝ လက်သင့်မခံချင်ဘူး။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။ ဥပဒေ အရ ကာကွယ်လို့ ရမလား။
ဘယ်လို နည်းနဲ့ ကာကွယ်မလဲ..
မနေ့ကတော့ သူဖုန်းကို လက်ခံ စကားပြောပြီး မင်းဘာလို့ ငါ့ကောင်မလေးကို နှောင့်ယှက်ဖို့ ကြိုးစားနေတာလဲ ဆိုပြီး မေးတော့.. သူ့ကိုပါ ယူမှ ဖြစ်မယ် ဆိုတာကလွဲလို့ တခြား စကားမပြောပါဘူး။
ငါမင်းကို ယူပြီး နေ့တိုင်း မင်းကို နိပ်စက်ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ မေးတော့..
အဲဒါ ရှင့်အပူမပါဘူး ကျမ ကိစ္စ ရှင်လုပ်ချင်လည်း လုပ်ပေါ့တဲ့..
စိတ္တဇ အရူးတယောက်နဲ့ စကားပြောရသလို စကားတွေက ဘယ်လိုမှ ညှိမရလောက်အောင် ဖြစ်နေတာ ဆိုတော့ စိတ်တော်တော် ပျက်နေမိတယ်။
ကျုပ်ရဲ့ သာယာတဲ့ ဘဝ ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖျက်ဆီးဖို့ အတွက် အကြံ ထုတ်နေတာလားတောင် မပြောတတ်လောက်အောင် ခေါင်းတွေလည်း ရှုပ်လှပါပြီ။
ဒီ ကိစ္စ ဖြေရှင်းနည်းလေး အကြံပေးကြပါအုန်း။
စကားမစပ် ကျုပ်ယူမည့် မိန်းကလေး အိမ်က အဲလို နှောက်ယှက်တာတွေ မသိသေးဘူး။ သိရင် ကျုပ်တို့ တသက်လုံး ဝေးသွားရလိမ့်မယ်။ ကျုပ်ကို သူ့တို့ သမီးနဲ့ သဘောတူ လက်ခံတယ် ဆိုတာလည်း သမီးလုပ်သူက ဆန္ဒ အရမ်းပြင်းထန်လို့ မနိုင်လို့ လွတ်ပေးတဲ့ သဘောနဲ့ ကြည့်ထားတာပါ။ သူနဲ့ ကျုပ်နဲ့ ချစ်သူ ဖြစ်တဲ့ ၆နှစ် သက်တမ်းမှာ ခဏခဏ တခြား လူနဲ့ ပေးစားဖို့ ကြံနေတဲ့ ယောက္ခမကြီး မသိစေချင်တာတော့ အမှန်ပဲ။
ပြောကြပါအုန်း။ ညည ခေါင်းတွေကိုက်လှပြီ..
နှစ်ယောက်ဆိုတာ များပါဘူးကွယ်..။ ယူလိုက် ယူလိုက်….ခွီးထဲမှပဲ ငါ့ကြတော့ ဘယ်သူမှလာမတောင်းဂျဘူး…ရေများရွာမိုးသဲနေဒယ်…မိုးနတ်မင်းဇုတ်… :mad:
ဟာဗျာ.. အရူးမ ကို စိတ်ပျက်လို့ပါ.. မနောက်ပါနဲ့..
ဒီကိစ္စ ဘယ်လို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသင့်သလဲဗျာ.. ဒီမှာ စာတော့ ဖတ်တယ် ပိုစ်က တော့ စမ်းတင်လိုက်တာမို့ ခေါင်းစဉ်မှာ နည်းနည်း လွဲ သွားတယ်။
ကိုဦးနှောက်ရဲ့ ကောင်မလေးအိမ် က ဒီကိစ္စတွေမသိဘူးဆိုတာကိုရော အဲဒီ့တစ်ယောက်ကသိလား။ တစ်ခုခုကို ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ တော်ကြာ ယောက္ခမလောင်းတွေကို သွားရှာပြီး ပြဿနာတွေထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလာနိုင်တယ်။
ဒါနဲ့ ဘာကိစ္စ မယူဖြစ်သေးဘဲနဲ့ အတူနေလိုက်ရတာလဲ။ အဲဒါ ကိုဦးနှောက်ရဲ့ အမှားပဲ။ နှစ်တွေကြာပြီဆိုပေမယ့် သူအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ နစ်နာတယ်လို့ထင်လို့ပါ။ အစ်ကိုက ဘယ်သူ့ကိုမှမယူဘူးဆိုရင်တော့ သူ့ဘက်က ပြဿနာမလုပ်ဘူးထင်တယ်။ ကြည့်ရတာ အစ်ကို့ကိုမပြတ်နိုင်တာရယ်။ အစ်ကိုဖြတ်သွားတာကို မကျေနပ်လို့တစ်ခုခုပြန်လုပ်ချင်တဲ့သဘောလို့ထင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ အစ်ကို့ကို မိန်းမမယူစေချင်လို့လို့ထင်ပါတယ်။ အခု အစ်ကို့ကောင်မလေးမှမဟုတ်ဘူး။ အခြားတစ်ယောက်နဲ့ယူမယ်ဆိုရင်လည်း အခုလိုပဲ ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။
ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်ကောင်မလေး ကို ကျုပ်ကြောင့် စိ်တ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေချင်ဘူးဗျာ..
ကျုပ် သူကို ကာကွယ်ပေးချင်တယ်။
အဲဒီ မိန်းမ နဲ့ စကားကုန်ကုန်ပြောပလိုက်တယ်.. မင်း နဲ့ ငါ ရှင်းစရာ မရှိတော့ဘူး မင်းတိုင်ချင်ရင် ရဲသွားတိုင်လိုက်.. ဥပဒေ ကြောင်းအရ စကားပြောမယ် လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အမှန်တော့ လင်မယားတောင် ၄၅ရက် တူတူမနေပဲ အိမ်ပေါ်က ဆင်းသွားခဲ့လျှင် မပတ်သတ်ခဲ့လျှင် ကွာရှင်းခွင့်တောင်းလို့ ရပါတယ်။ သူဘက်က ပိုင်ရင် သူ တရားစွဲတာ ဘာညာ တခုခု လုပ်ပြီးရောပေါ့..
သူနဲ့ ၈နှစ် ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာ အတွင်းမှာ ကျုပ် မဟုတ်တဲ့ တခြား လူတွေနဲ့ ရှုပ်ခြင်း ရှိမရှိ သူသာလျှင် သိနိုင်မှာမို့ ကျုပ်တော့ အဲဒီ မိန်းမ ကို အရမ်း ရွံ့ပြီး မုန်းနေမိတယ်။
အင်းပေါ့နော်။ သူဘက်ကလည်း ဘယ်လိုနေခဲ့တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ကမသိတော့ အစ်ကိုအနေနဲ့လည်း အဲလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ပေးရမလဲတောင် မပြောတတ်တော့ဘူး။ သူ့အသိုင်းအဝိုင်းကိုလှမ်းပြီး အကူအညီတောင်းရင်ကော မရနိုင်ဘူးလား။ သူ့အစ်မကတောင် တားနေတယ်ဆိုတော့လေ။ သူ့လုပ်ရပ်တွေကိုပြောပြကြည့်ပါလား။ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲဆိုတာသိရတာပေ့ါ။ သူ့မိဘတွေက သူ့ကိုနိုင်အောင်ထိန်းလိုက်နိုင်ရင်တော့ အစ်ကို့အတွက် ဝမ်းသာစရာပေါ့။
သူ့ အဖေ က အခု လေဖြတ်နေလို့ သူ့သမီး အရှက်မရှိ လုပ်တဲ့ ကိစ္စ ကြားပြီး သွေးကြောပြတ်ပြီး သေမှာ စိုးလို့ သူ့ဟာသူ ထိန်းမယ် ဆိုပြီး မပြောဖို့ သူ့အမ က တောင်းဆိုထားလို့ စောင့်နေတာပါ။
နယ်ဘက်မှာ နေတဲ့ သူ့ အဖေ နဲ့ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းက မသိသေးဘူး ထင်တယ်။ မသိဖို့ ပိုများတယ်။
ကိုဦးနှောက်ရေ … လွယ်မလိုလိုနဲ့ ခက်တဲ့ လူမှုရေး ပြသနာမျိုးပါလားနော် … ။
ကျွန်မလည်း မိန်းမတစ်ယောက်ပေမယ့် …. ဒီတစ်ခါတော့ ..ဟိုမိန်းမဘက်က လွန်တယ်လို့မြင်မိပါတယ် … ။ ပြောရလျှင် 8နှစ်ကြာပြီးမှ …. နွားမရွံပိတ်လုပ်ပြီး ပြန်လာတာလို့ပဲ မြင်မိတယ် .. .. အစ်ကိုနဲ့ ပြတ်ခဲ့တဲ့ အတွင်း .. သူတခြား သူနဲ့ ..ပလူးပလဲ မနေဘူးလို့ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ဘူး .. အခုမှပြန်လာတာ …သူခိုင်းကောင်းတဲ့ နွားမတွေ့သွားလို့ .. အစ်ကို့ဆီ ဓါးစာခံပြန်လုပ်တာရယ် … လွတ်သွားတဲ့ ငါးကြီးမှန်း သိလို့ ပြန်လာတာတာရယ် … ၊ သက်သက် တမင် အစ်ကို့ မင်္ဂလာကိစ္စ နှောက်ယှက်ချင်လို့ .. … ဝင်လာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ..ဒါ့ပြင် သူ့ဘက်က လျှော်ကြေးလို့များ … တောင်းခံချင်နေသလားပဲ … ။ နှစ်ဦးသဘောတူခဲ့တဲ့ ကိစ္စမှာ … အရှက်ကွဲခံပြီး … နာမည်ကို စတေးလို့ လျှော်ကြေးတောင်းချင်တဲ့ ပိုင်းလုံးမတွေလည်း ရှိတယ်..မြင်ဖူးတယ် … ။ အဲ့လိုသာဖြစ်လာပြီဆို အစ်ကို ရည်ရွယ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးဘက်က သိသွားမယ် …. ပိုဆိုးမယ် .. ဒီတော့ရာ …. ပြသနာကို သေချာစွာ အနုနည်းနဲ့ ကိုင်တွယ်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော် …
အစ်ကို့ ဇနီးလောင်းက … ဒီအချိန်မှာ သဘောထားပြည့်ဝပြီး နားလည် နိုင်လို့သာတော်သေးတယ် .. ။ အဓိကကတော့ … တကယ်ယူရမယ့် နှစ်ယောက်ပါပဲ … ။ နှစ်ဖက်စလုံးနားလည်မှုရှိပြီး သီးခံ ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်ဆို … ရဲရဲကြီးရှေ့တိုးဖို့ အကြံပေးပါရစေ ။ ကောင်မလေးဘက်ကတောင် … အတိတ်တွေကို ခွင့်လွှတ်ပြီး လက်ရှိဘဝကိုပဲ မြတ်နိုးတာပဲ … အစ်ကို့ရဲ့ သတိ္တရှိမှုပဲ လိုတယ် … ။
မယူခင်အချိန်ထိတော့ .. အတတ်နိုင်ဆုံး ဒီကိစ္စပိုဆိုးမလာအောင် လုပ်သင့်တယ် … မင်္ဂလာပွဲမလုပ်ခင်နှစ်ဖက်မိဘ ဆုံပြီး လက်မှတ်ထိုးတာမျိုးတော့ လုပ်ထားသင့်တယ် … တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုတော့ မလိုအပ်တဲ့ လူမဖိတ်ပါနဲ့ .. လူသိနည်းလေကောင်းလေမို့ပါ ပဲ … ။ ယူပြီးသွားလို့ ယောက္ခမသိသည့်တိုင်အောင် … နှစ်ဦးသဘောတူ တရားဝင်လက်မှတ်ထိုးတာပြီးပြီမို့ … အစ်ကိုတို့ နှစ်ယောက် ဝေးဖို့ .. မလိုတော့ပါဘူး ..အ လွန်ဆုံးယောက္ခမ မျက်မုန်းကျိုးရုံပေါ့ .. ဒါကလည်း သားအချစ်မြေးအနှစ်ပါ …. နောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာ ယောက္ခမကို ဝတ္တရားမပျက်ကွက်တာမျိုး ၊ သားသမီး မွေးပေးတာမျိုးဆို .. စိတ်ပြန်ပြေသွားလိမ့်မယ် လို့ ထင်ပါတယ် … ။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကတော့… လိုတာလည်းရှိသလို မလိုတာလည်း ရှိတတ်ပါတယ် ..ဒီတော့ သူများ ဘေးစကားကို နားယောင်ပြီး တွန့် ဆုတ်တွေဝေနေမယ့်အစား ….ကိုယ်တကယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲ တွေး၊ ရှေ့ဆက်တိုးပြီး ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပေါင်းဖက်ဖို့ ကြိုးစားပါလို့ပဲ .. စိတ်ရင်းနဲ့ အကြံပေးလိုက်ချင်ပါတယ် … ။
လျော်ကြေးလိုချင်လို့လား မေးတော့ ဘာမှ မပြောဘူး။
သူကိုပဲ ယူပါ.. သူကိုပါ ယူရမယ် ဒီစကားက လွဲရင် တခြား စကားကို မပြောတာမို့ တော်တော် စိတ်ပျက်စရာကြီး ဖြစ်နေတယ်လို့ မြင်မိတယ်။
ပြောရရင် ယောကျားကြီးတယောက်ကို မိန်းမ တယောက်က နှောက်ယှက်တာ အသံထွက်နေရလားလို့ ပြောစရာဖြစ်မယ်။
သူက တကယ်စိတ်မမှန်တော့တာ အမှန်ပဲ။
အဲဒီ မိန်းမ ရဲ့ မိဘတွေက နယ်မှာ နေကြပြီး ဒီမှာ တိုင်းရင်းဆေးဆရာမ လေး လုပ်နေပြီး ဆေးခန်းတွေ ဘာတွေ ထိုင်ပါတယ်။
သူရဲ့ အလုပ်အကိုင် နေရာ အဆင့်အတန်း ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ဒါမျိုးလုပ်တာ အရမ်း အံဩဖို့ လည်း ကောင်းလှပါတယ်။ ကျုပ်ကောင်မလေးကပြောတယ် ဒီလိုမျိုးရင်းရဲတာ အရမ်းထူးဆန်းပြီး သနားဖို့တော်တော် ကောင်းတယ်လို့ တောင်ပြောတယ်။
အဲဒီ မိန်းမက ရန်ကုန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ အခန်းငှားနေပြီး ဆုံးမ မဲ့သူ မရှိဖြစ်နေတာပါ။
ကိုယ်တိုင်ကတောင် တိုင်းရင်းဆေးဆရာမလုပ်နေတာ .. နာမည်နဲ့ သိက္ခာက အတော်အရေးကြီးတာ သူလည်း သိလောက်မှာပါ … ။ ကျွန်မစိတ်ထင်တော့ အစ်ကို့ကို စိတ်အနှောက်ယှက်ပေးပြီး သွေးတိုးစမ်းနေတာပဲ ဖြစ်ရမယ် … ။ လင်ပူမိနေတာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး … ။
ဒီတော့ အစ်ကိုရေ .. ချွန်တာတော့မဟုတ်ဘူး … အစ်ကို့ဘက်က ထိပ်တိုက်တွေ့ရပါတော့မယ် … ။ ထိပ်တိုက်ဆွေးနွေးရပါလိမ့်မယ် … ။ လိုချင်တာ က လျှော်ကြေးလား .. လက်ထပ်ချင်တာလား …. ။ မိန်းမချင်း ကိုယ်ချင်းစာပေမယ့် … . လျှော်ကြေးဆိုတာ နှစ်ဦးသဘောတူ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စမှာ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့တောင်းမလဲ … ။ သူ့ဘက်က လျှော်ကြေးလု့ ိပြောထွက်လျှင်တောင် …. အရှက်ကွဲခံပြီး တရားစွဲဦးမလား … လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ … (သူမ တရားမစွဲမှာ အသေချာပါ ) ။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ သူမကို လက်ထပ်ခိုင်းသလား …. ။ ဒါဆိုလျှင်တော့ .. ပြင်းပြင်းထန်ထန်ငြင်း ပစ်လိုက်ပါ … ။ မိန်းမဆိုတဲ့ အမျိုးက ဥပက္ခာပြုခံရတဲ့ ဒဏ်ကို ကြာကြာမခံနိုင်တတ်ကြပါဘူး …. ။ အစ်ကို့ဘက်ကသာ တိတိလင်းလင်း ငြင်းနိုင်ခဲ့လျှင် .. နောက်ပို်င်း လက်လျော့သွားမယ် ထင်ပါတယ် ..
(နောက်ဆုံးဘယ်လို ဆုံးဖြတ်ချက်ချသလဲဆိုတာ ပို့စ်တင်ပြီး ပြန်လာပြောဦးနော် … အကြံတောင်းတုန်းက တောင်းပြီး ဟီး )
လျော်ကြေး ကိစ္စ အကြောင်း တခွန်းမှ မဟ လာပါဘူး။
ကျုပ် ကောင်မလေး ဆီ ကို ဖုန်းဆက်လာလို့ သူကို မင်း ဘာပြောချင်လို့ ဖုန်းဆက်တာလဲ ဆိုပြီး မေးပြီးပါပြီ။
သူကိုပဲ ယူရမယ် ကျုပ်ကောင်မလေး ကို မယူရဘူး လို့ ပြောချင်လို့ပါ။
အခုတော့ ပုံစံ ပြောင်းသွားတာကတော့ သူ နဲ့ ကျုပ် ကောင်မလေး ၂ယောက်လုံး ကို တပြိုင်တည်း ယူရမယ် အဲလို ပြောချင်လို့ ဖုန်းဆက်တာပါတဲ့။
ကျုပ် ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ခဲ့တာ ကြာခဲ့သလို တခါမှ အစ ဆွဲ ထုတ်သလို မလုပ်ခဲ့ဘူးရိုး အမှန်ပါ။
ကျုပ် ဥပက္ခာပြု ထားတာ အလွန်ကြာခဲ့ပါပြီ။ အချိန် အတိုင်းအတာ အရ ၈နှစ် ကျော်ပါပြီ။ ကျုပ်လည်း မိသားစု ဘဝ တခု နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ဘဝ ကို နေချင်ပါတယ်။ ကျုပ် ဘဝ မှာ ရည်းစားဆိုလို့ အဲဒီ မိန်းမ နဲ့ ကျုပ်ဇနီးလောင်းနဲ့ ၂ယောက်ပဲ ထားခဲ့ဖူးတာပါ။
ကျုပ် ဘယ်သူကိုမှ မယုတ်မာခဲ့ဘူးပါဘူး။ မှန်မှန်ကန်ကန် နေဖို့လည်း ကြိုးစားပါတယ်။ မှန်အောင်နေလို့လည်း သူ့မိသားစု ဝင်တွေ က အစ ကျုပ် ပြောတာကို လက်ခံပြီး ဘာမှ မပြောကြတာပါ။ ကျုပ်ဘက်ကသာ မှားနေခဲ့မယ် ဆိုရင် သူတို့လည်း ငြိမ်ခံ နေကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အင်းကိုရီးယားကားတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲလို့တော့ ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်။ ကိုဦးနှောက်မှာ သူနဲ့ပါတ် သက်တဲ့လျို့ဝှက်ချက်မရှိဘူးဆိုရင် အခုကောင်မလေးနဲ့ကော ကိုဦးနှောက်ရဲ့မိဘတွေ နဲ့ပါပေးတွေ့ လိုက်ပြီး ကိုဦးနှောက်တို့ရဲ့လက်ရှိသဘောထားကိုပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောပြပေါ့။ သူ့မိသားစုအသိုင်း အဝိုင်းကိုလဲပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောပြပေါ့။ လက်ထပ်ပြီး သတင်းစာကနေ လက်ထပ်ပြီးစီးကြောင်း တရားဝင်ထည့်ပေါ့။ သူဘယ်လောက်နှောက်ယှက်နိုင်မှာမို့လို့လဲ။ အလွန် တနှစ်ပေါ့။ သူနဲ့က တရားဝင်စာချုပ်စာတမ်းနဲ့မဖြစ်ခဲ့ ရင် ပြသနာမရှိပါဘူး။ လူမှု့ရေးအရ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ် တာကလွဲလို့ တရားဥပဒေအရဘာမှ မလုပ်နိုင် ပါဘူး။ အတူနေခဲ့လို့နစ်နာတယ်လို့ပြောလာရင်တော့လဲ နားလည်မှု့နဲ့ပဲရှင်းရမှာပဲ။ ဥပဒေအရ အိမ်ထောင် သည် တွေတောင်တရားဝင်မကွာရှင်းရသေးပေမဲ့ ၆ နှစ်ထိ အဆက်အဆံ အထောက်အပံ့ ဘာမှမရှိရင် အလိုလိုလင်ခန်းမယားခန်းပြတ်ပါတယ်။ ကိုဦးနှောက်တို့က ရှစ်နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ တရားဥပဒေအရတော့ ပြသနာမရှိပါဘူး။ မိန်းကလေးရဲ့ ဘဝနဲ့ နစ်နာမှု့ကတော့အပြင်မှာပဲပြေလည်အောင်ရှင်းရမှာပါပဲ။ မယူသေးပဲအတူနေတာ ကတော့ နှစ်ဖက် လုံးအမှားပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ်တုန်းက လူကြီးတွေ စုံရာ နဲ့ တခါ တည်းကို အပြတ် ရှင်းပြီးပါပြီ။
အဲဒါဆိုပြီးပြီပေါ့။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆောင်ရွက်လိုက်ပါ။ သူ့အလိုလိုနောက်ဆုတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မပါတ်ဝန်းကျင်မှာဒါမျိုးခပ်ဆင်ဆင်ကြုံဖူးလို့ပါ။ လက်ထပ်ပြီးသူနှောက်ယှက်လဲခဏပေါ့။ ကိုဦးနှောက်ဇနီးလောင်းကိုသာမချွင်းမချန်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားပါ။ ဇနီးလောင်းပြသနာမရှိ သမျှ သူနှောက်ယှက်လဲသီးခံလိုက်ပေါ့။ ကိုယ့်ဘက်ကတရားဝင်ဖြစ်ပြီးသွားရင်သူ အကြာကြီးတောင့် မခံပါဘူး။ သူ့ဟာသူသိလာပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ပြုပြီးရင်တော့ ကိုဦးနှောက် နဲ့ဇနီးစည်းလုံးဖို့တော့လိုသပေါ့။ ဒါမှသူနှောက်ယှက်တာတောင့်ခံနိုင်မှာ။ ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့အမှား မို့ဒီလောက်တော့စိတ်ညစ်ခံလိုက်ပါ။ ဇနီးကိုလဲပြောပြထားပေါ့။ ငါနဲ့ယူမှတော့ငါ့ရဲ့ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းခံအားလုံးမျှဝေခံစားပေးပါလို့။ သူ့ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းလဲ ရှင်မျှဝေခံပေးပေါ့။
ဇနီးလောင်းကို သိအောင် ပြောပြထားတယ်။
သူ က သိခါစတော့ အံဩတယ်။ နောက်တော့ သနားစိတ်ဖြစ်တယ်။ နောက်ပိုင်း သိပ်ပြင်းထန် လွန်းတော့ သူလည်း လူသားဆိုတော့ ဒေါသဖြစ်နေပြီပေါ့။ အတိုင်းအတာ တခုကို လွန်လာပြီလေ.. အဲဒီမိန်းမ ဆက်တိုက် နှောက်ယှက်တာ ၂နှစ်လောက် ကို ရှိနေပြီ။ ခါတိုင်းဆိုရင်တော့ ပိုးထ တဲ့ အချိန် ၁ပတ်လောက် နှောက်ယှက်ပြီးရင် ငြိမ်သွားတယ်။ အခု အရင်လို မဟုတ်တော့ပဲ ဆက်တိုက်ဆိုသလို လနဲ့ ချီနေပြီ ဆိုတော့ ဂရုဏာစိတ်ဖြစ်တဲ့ သူတောင် ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ သဘောဖြစ်နေတာပေါ့။
ကျုပ်လည်း အားနာပါတယ် ကျုပ် သူကို ကာကွယ်ပေးပြီး စောင့်ရှောက်ပေးရမှာ သူက ကျုပ်ကို နားလည်ပေးနေတာကို အရမ်းအားနာမိတယ်။
နှစ်ယောက်စလုံး မယူဘဲနေလိုက်ရင် နှောင့်ယှက်တဲ့သူလည်း မနှောင့်ယှက်လောက်တော့ဘူး၊
နောက်တစ်ယောက်လည်း စိတ်မညစ်ရတော့ဘူးပေါ့။ကိုဦးနှောက်လည်း ခေါင်းမစားတော့ဘူးပေါ့။
အခု ကောင်မလေးကို လက်ထက်ဖို့ တန်းမှီတဲ့ သားမက် ဖြစ်ဖို့ အိမ်တဆောင် မီးတပြောင် နဲ့ ထားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရတာ ၆နှစ်ကျော်ပြီလေ။ ကျုပ်ရဲ့ တပ်မက်မှုကြောင့် ဘယ်လောက်ပေးဆပ်ခဲ့ရလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကို အသိဆုံးပါပဲ။
ယောက္ခမသိသွားရင် သီချင်းထဲက ကိုပေါ လို တကယ်ဖြစ်သွားမှဗျ..
ကျုပ်လို မရှိတဲ့ ကောင်ကို ဒီလောက် အချိန်ပေးခဲ့တာကို တော်တော် ကျေးဇူးတင်နေအုန်းမှာဗျ..
ကိုဦးနှောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကတော့ တကယ်ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းလိုပါပဲ။ မိန်းကလေးဖက်ကတော့ ပြောရရင်တော့ သူရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပါမငဲ့ဘဲနဲ့ဆိုတော့ သူရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ရ အရမ်းပြင်းလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းကို စိတ်မကောင်းစရာ။ သနားစရာကောင်းပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အရမ်းပြင်းပြင်းထန်ထန် မတုံပြန်စေချင်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာရှိတဲ့ စိတ်ခံစားချက် သံယောဇဉ်ချင်းက မတူကြပါဘူး။ သူက ဘယ်လောက်တောင် သံယောဇဉ်တွယ်ပြီးနေလာတာလဲမသိဘူး။ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ နူးညံ့တဲ့ ဖြေရှင်းနည်းကိုဘဲ သုံးစေချင်ပါတယ်။ သူ့ဘက်က ခံစားရတာ သက်သာတဲ့နည်းကိုပေါ့။ သူ့ကို အရမ်းသနားလို့ပါ။ ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုမှ မချစ်နိုင်တဲ့၊ မုန်းတီးနေတဲ့လူကို တစ်ဖက်သက်ချစ်ရတာ အရမ်းခံစားရမယ်လို့ ထင်မိလို့ပါ။ အရမ်းစိတ်မကောင်းဘူး။ ကိုယ်ချင်းစာတရားလေးတဲ့ ဆိုတော့ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
သူနဲ့ စကားပြောဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးက မှတ်ချက်ပေးကြတယ်။
အဲဒီ မိန်းမ ရူးသွားပြီတဲ့..
ဟဲဟဲ ကြည့်ရတာ ရူးလောက်အောင် အပြုစားခံထားရတာထင်တယ်။
ကျွန်မတော့ မထင်ဘူး ရူးလောက်အောင် ပြုစားခံရတယ်ဆိုတာ …
၈ နှစ်ဆိုတဲ့ အတိုင်းတာက ….. သံယောဇဉ်ရှိခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်တောင်. အဆက်သွယ်ဖြတ်ပြီးနေနိုင်တဲ့ အချိန်ကာလမျိုး မဟုတ်တာကြောင့်ပါ …
ကျန်တာကတော့ ဖြစ်လာသမျှကို ရင်ဆိုင်ရမှာပါ။ ကိုယ်ကသွားပတ်သက်မိတာကိုး။ ပတ်သက်တာမှ
လက်ရှိကောင်မလေးနဲ့ ပဲတိုင်ပင်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ သူ့အသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းကို
သူအသိဆုံးမို့ အဆင်အပြေဆုံးကိုစဉ်းစားနိုင်မှာပါ။ အဓိက ကတော့ နားလည်မှုကို ထိန်းထားနိုင်ဖို့ပါပဲ။
လက်ရှိကောင်မလေးကို ပွင့်လင်းပါ။ တိုင်ပင်ပြီးမှလုပ်ပါ။ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ဆိုင်နေ
တာမို့ ဘေးလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖြစ်ပြီးသမျှကိုတော့ ဘာမှထင်မြင်ချက်မပေးလိုပါ။
ဖတ်ပြီး အကြံမပေးနိုင်တဲ့ အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး
ကိုလဲမိန်းကလေးဆိုပေမယ့် အဲလိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့တော့ ထင်တယ်လေ
သူခံစားရလို့ ဒီလိုတွေလုပ်နေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်
သူ့ကိုအေးအေးဆေးဆေး သွားပြီး တောင်းပန်ရင်ရော
အဲဒီ အဆင့်တွေ ကျော်ခဲ့ပြီ။
အခု သိချင်တာ တရားဥပဒေ အရ ဘယ်လိုရှင်းရင် ရနိုင်မလဲ သိချင်နေတာပါ။
ရှေ့နေတယောက်ယောက် နဲ့ တိုင်ပင်ပီး
ကိုကိုကြောင် ပြောလည်း ပြောဂျင်ဇယာ ….
ကိုယ့်ဆြာ ယောက္ခမလောင်းဂျီး က ဒီဆိုက် ပိတ်သတ်ဆိုရင်
ကိုရင်တော့ အလိုလိုနေရင်း နားကားနေဦးမယ်…
သူ့သိက္ခာကို လည် းထည့်တွက်ဦးဗျ …
သူ့ပါတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဒီဆိုက် သုံးတဲ့လူ ရှိရင်
ဒါဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါပါ ဆိုတဲ့ အိုင်ဒန်တတီ ကို
ပြောနိုင်တဲ့လူ ဖတ်မိမယ်ဆိုရင်…..အင်း …
မပူနဲ့ ကျုပ် ယောက္ခမ ကော ကျုပ်ကောင်မလေး ကော ကျုပ် ကို အတင်းလိုချင်နေတဲ့ မိန်းမ ကော ဘယ်သူမှ အွန်လိုင်း မသုံးသလို နာမည်တွေလည်း မသုံး ထားတဲ့ အတွက် စိတ်ပူစရာ မရှိဘူး ကိုယ့်လူ.. သတိပေးတာ ဝမ်းသာတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်။
ဒုက္ခ ကို ဒုက္ခ မှန်း မသိတော့ ..
ရရှိ တော့ ခံစား..
ခံစား ရတာ က ဒုက္ခ ပါလားကွယ်…။
ဒီဒုက္ခ အတွက် အကြံ တောင်းနေတော့ ဒုက္ခ ကြီးနေတဲ့သူတွေက
ဒုက္ခ တွေ မျှဝေပေးနေကြပါလား…..ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်…။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ပြုလုပ်ခဲ့စဉ်က ဥပဒေဘောင်ထဲကမှမဟုတ်တာ ..
အသရေဖျက်မှုဆိုရအောင်လည်း လူသိရင်ကြား ကြိုးစားသေးတာမဟုတ်….
ကိုယ်က ပွဲကြမ်းတော့မှ သူရှက်ရမ်းရမ်းရင် ပိုဆိုးမယ့်အဖြစ်…
ကိုယ်ပြုသောကံ ကိုယ်သာခံ လို့တော့ မပြောချင်တော့ပါဘူး…
အစွဲအလမ်းကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ရူးနေတယ်ဆိုတာကတော့
တဘက် မိန်းကလေးကို သနားမိပါတယ် …..
ခင်ဗျားအနေနဲ ့၊ အရင်ကောင်မလေး ကို ဟိုဒင်းဟိုဝါတွေများ ဖြစ်ခဲ့သေးလား
ဒါမှ စဉ်းစားလို ့ရမှာ။
ဦးနှောက်ကလည်းဇွတ်ဘဲ၊ ဇာတ်လမ်းအရဆိုရင် ပထမ မိန်းကလေးက သနားစရာဖြစ်နေပြီ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အတူတူနေခဲ့ကြတယ်မို့ မိန်းကလေးဘက်က အရူးတစ်ယောက်လိုဖြစ်တာလည်း မလွန်ဘူးလေ။ဒီလိုလုပ်ပါလား အဲဒီမိန်းခလေး နှစ်ယောက်သာ ယူခိုင်းလိုက်ရင်ကော။ သူတို့အချင်းချင်းတော့ အဆင်ပြေလောက်မှာပါ။
မယူနိုင်ပါဘူး.. အရူးမ ညမှ ထ ပြီး လည်ပင်း ညှစ်လို့ ၂ယောက်လုံး သေ နေအုန်းမယ်။
ခင်ဗျား အရင်ကောင်မလေးနဲ့ သေချာတွေ့ပြီး ဒူးတိုက်ဆွေးနွေးလိုက်ပါ၊ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ မကြောက်ပါနဲ့။
မိန်းကလေးတွေက ကိုင်တွယ်တတ်ရင် စိတ်ပျော့ပါတယ်။ သူတို့က အကြမ်းဖက်တာမကြိုက်တတ်ဘူး။
ခင်ဗျားအရင်တွဲခဲ့တာဘဲဗျာ၊ သူ့စိတ်ဓါတ်အကြောင်းသိမှာပေါ့၊ သေချာစဉ်းစားပြီး နည်းလမ်းရှာပါ။
ဖင်မနုင်ဘဲ ပဲကြီးဟင်း စားတယ်ဆိုတာ အဲဒါမျိုးပေ့ါ ။
မိုနာ..နဲနဲ ပြေားကြည့်မယ်နော်…ကိုဦနှောက် အဲဒီ့ အမျိုးသမီး ရယ်အခုကောင်မလေး ရယ် ၃ ယောက် မျက်နာခြင်းဆိုင် ဖြေရှင်း လိုက် ပါ..ဖြစ်ချင်တာ ကို ပွင့် ၂လင်း၂ ဖြေရှင်း လိုက် ပါ…အ ဖြေတခု ထွက်လာ ပါ လိမ့် မယ်….
ကိုဦးနှောက် ရဲ့ သဘောထားပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်
တကယ်ပြတ်သားတယ်ဆိုရင် ဟိုအရူးမ ဘယ်လောက်တွယ်ကပ်နေပါစေ ဂရုစိုက်စရာ မလိုပါဘူး
ရွှေလက်တွဲမယ့် ချစ်သူအပေါ်မှာတော့ ပွင့်လင်းရိုးသားရမယ်နော်၊ ဘာမဆိုသူနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ပါ
ဒါဆိုလဲ ဒီလိုလုပ်ဗျာ.. အစ်ကို ဖုန်းတွေ နေတဲ့နေရာတွေ အကုန်ပြောင်းပလိုက်..အခု အစ်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုလဲ မြန်မြန်ယူပြီး တအိုးတအိမ်ထူထောင်လိုက် တချို.ကိစ္စတွေက အဖြေရှာလေ ပိုရှုပ်လေပဲဗျ… အခုက အစ်ကိုက လူပျို လူလွတ်ဆိုတော့လဲ…. ဟို မိန်းမ ဆိုတဲ့ သူက အစ်ကိုကိုကပ်မှာပေါ့…ကပ်မရတော့ အစ်ကိုကောင်မလေးကို ပြသနာရှာမှာပေါ့…
အစ်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေးကို မြန်မြန်ယူပြီး အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပေါ့…အဲဒီတော့ အသိုင်းအဝိုင်းကပါ သူများအိမ်ထောင်ပျက်ပြားသွားမှာ ဆိုးလို. ဝိုင်းထိန်းပေးကြလိမ့်မယ့်……….
တစ်ခုတော့ရှိတယ် ရူးနေတယ်ဆိုရင်တော့ သတိထားပေါ့အစ်ကိုရယ်………..
ဇတ်လမ်းက ပတ်ရှုပ်နေတာ ကိုရီးယား ဇတ်လမ်း ဖြစ်နေတာ.. ကျုပ် ဖုန်းနံပါတ်ခဏခဏ ပြောင်းကိုင်တယ်။ ပြောင်းကိုင်တဲ့ နံပါတ် ကို ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်က ရလဲကို မသိဘူး။
အခု ကျုပ်အမ အရင်းကိုတောင် မိန်းမယူရင်နေဖို့ ဝယ်ထားတဲ့ အိမ်ကို လိပ်စာ ပြောမထားဘူး။ အိမ်ဝယ်လိုက်တယ် ပြင်နေတယ် ဆိုတာကို သူဘယ်က ကြားမှန်းမသိပဲ ကျုပ် ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို လိုက်မေးနေတာ.. ကျုပ် ဝယ်တဲ့ အိမ်လိပ်စာ ပြောပြ ပြောပြ ဆိုပြီး ဖြစ်နေတာ..
အခုအချိန်ထိတော့ အဲဒီ မိန်းမ ကျုပ် အိမ်လိပ်စာ မသိသေးဘူး။ ဘယ်သူမှ မပြောပြလို့ပါ။
ကျုပ်ကောင်မလေးရဲ့ အလုပ်ကို ဘယ်လို သိသွားမှန်း မသိပဲ အလုပ်ရဲ့ ဖုန်းကို ဆက်လာလို့ ကောင်မလေးက စိတ်ဆိုးသွားတာ.. ကျုပ်ဖုန်းကတော့ သူ ဆက်တိုင်း call blocker က တားပေးလို့ သူပြောမရလို့ ပတ်ရမ်းတဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ..
ဘာမှတော့ အကြံဝင်မပေးတတ်ပေမဲ့ ရေးထားတဲ့ မန့်တွေဖတ်ပြီးအူတက်အောင်ရယ်သွားပါကြောင်း…………………………။
နှစ်ယောက်ဆိုတာ များပါဘူးကွယ်..။ ယူလိုက် ယူလိုက်….ခွီးထဲမှပဲ ငါ့ကြတော့ ဘယ်သူမှလာမတောင်းဂျဘူး…ရေများရွာမိုးသဲနေဒယ်…မိုးနတ်မင်းဇုတ်… :
အဒေါ်ကြီး ရီသွားတယ်ပေါ့.. ကျုပ်မှန်းထားတဲ့ ကောင်မလေးက အဒေါ်ကြီး ညီမလေး ဆိုရင် ဆက်ရီမှာလား..
ဦးနှောက် ရေ ဒေါသသံတွေပါနေတယ်နော။
စိတ်မဆိုးပါနဲ့ အဒေါ်ရယ်.. ကျုပ်က အဒေါ် က ရီစရာ မြင်လို့ ရီစရာ အဖြစ် စ တာပါဗျာ..
အောက်မှာရေးထားတဲ့ comment တွေကိုဖတ်ပြီးရယ်ရတယ်လို့ ပြောတာပါကွဲ့……..နောက်ဆို
တူလေးလည်း မျက်မှန်တပ်ပြီး သေသေချာချာဖတ်ပြီးမှ ပြန်ပြောစေချင်တယ်ကွယ်။
ဟုတ်ပ!!! ငါ့တူ ရေ .. ဦးလေးလဲ မန့်မယ် . မန့်မယ် နဲ့ မမန့်ဖြစ်တာ .. ဒါမျိုးက နူးညံ့တာ မို့ . အကြံ လဲ မပေးရဲဘူး ငါ့တူ ရေ … … .. ဦးလေး အဲလို လဲ ၂ in ၁ မကြုံ ဖူးသေးတာပါတာ ပေါ့။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် မင်း အဒေါ် ကလဲ ကြောက်ရသေးသကိုး …. ကွဲ့။
ဦးလေးရေ.. မန့်မယ် ဆိုလည်း မန့်လို့ ရပါတယ် ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျုပ်ဗျာ.. ခေါင်းစားလွန်းလို့ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတဲ့ ကိစ္စ ကျုပ်ကို မျောက်ပွဲ ကြည့်သလို ရီစရာ အနေနဲ့ လာပြောတော့ ကျုပ် ကို ကိုယ်ချင်းစာပေးစေချင်လို့ပါ။
ဥပမာ မျောက်တစ်ကောင် ယားလို့ ကုတ်တာ သန်းကိုက်လို့ဗျ.. လူတွေ ရီစရာ ဖြစ်အောင် ကုတ်ပြတာ မဟုတ်တာတော့ အမှန်ပဲဗျာ..
ကျုပ် က အသစ်ဆိုတော့ အဒေါ်တွေ ဦးလေးတွေ အစုံလိုက် ဆိုရင်တော့ ပိုကြောက်တယ် ဗျာ..
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင် အခုလိုပြသနာမျိုးကို လူသိရှင်ကြားမတိုင်ပင်စကောင်းပါဟု ထင်ပါသည်။
သူ့လုပ်ရပ်များသည် အနည်းငယ်လွန်ကျူးသည်လို့ ထင်စရာကောင်းပေမယ့်… အခုလိုဖြစ်လာအောင် အစပျိုးတဲ့သူထဲမှာ အစ်ကိုကအဓိကဇာတ်ကောင်ပါ… အခုသူဒီလိုလုပ်တော့ အရူးလို့စွပ်စွဲတယ်… ရွံ့ရှာစက်ဆုပ်ပုံနဲ့ပေါ့…သူကဘာမှ မလုပ်ပဲငြိမ်နေရင်ဒီအတီုင်းပြီးသွားမယ်… သူ့နေရာမှာ ကိုယ့်သားချင်းတစ်ယောက်ယောက်ဆိုရင်…အစ်ကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲသိချင်သား…
ကျုပ်သာ ဩဇာ ရှိတဲ့ သားချင်း တယောက်သာ ဆိုလျှင် သူကို တနေရာကို ပို့ပြီး လူတကာ ကို အရှက်မရှိ လျှောက်ပြောနေတာတွေကို ဟန့်တားလိုက်တော့မယ်။
အခု ရေးထားတာတွေကလည်း နာမည်တွေ မပါသလို ကျုပ် ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သိမယ် မထင်ဘူး။ တကယ်လို့ သိခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ သိတဲ့ လူကို လေးစားပါတယ်လို့ ပြောလိုပါတယ်။
တခါကြားလိုက်တာကတော့ မင်္ဂလာဆောင်မှာ သတို ့သားတစ်ယောက်၊
သတို ့သမီး(၂)ယောက်ဗျ။အကြံမပေးတတ်တော့ပါဘူး။ဖြစ်နိုင်ရင် အကို
မလိုချင်တဲ့တစ်ယောက် ကျနော့်သာပေးပါတော့လို ့။ခုလို တောင်းရလောက်တဲ့
ထိကို မစွံ ့တာပါ။ဟီးးးးးးးးး
အေးဗျာ ပေးလို့ ရရင် ပေးချင်ပါတယ်။
ကျုပ် သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သူ နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ မို့ သူ လျှောက်ပြောပြီး ဖွ ထားလို့ သိထားပေမဲ့ သူစိတ်တည်ငြိမ်အောင် ယောကျားပေးစားဖို့ စပ်ပေးတာတွေ မကြာမကြာ လုပ်ကြပါတယ်။ သူ က မရဘူး ဒါမှ ဒါ အဲလို စိတ်မျိုး ဖြစ်နေလို့ လက်လျော့ထားကြတယ်ဗျ..
သူ ့ကိုပါယူရင်တော့ အူးလေးထင်သလို ညသန်းခေါင်ကျော်..ထညှစ်ပြီး ကိစ္စတုံးလိုက်ရင် ဒုက္ခ
ကျုပ်လို ကိလေသာကင်းစင် သူတော်စင်သာ လုပ်လိုက်ပါတော့ဗျာ..
အပေါ်က ဦးဆုံးလာအားပေးတဲ့ အုကြောင်ခမျာ သနားဆြာပဲနော်..
အူးဗိုက်တို ့များ သူကြီးလေသံအတိုင်းနော်. စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးးးးး
ဒီ ပိုစ့် ကို လုံးဝ အတည် မမန့်ဘူးလို့ နေတာဗျာ .. မနေနိုင်ဘူး .. မန့်လိုက်ဦးမယ်။
ကျုပ် ဘကြီး က ကျုပ်ကြီးဒေါ်ကြီး ကို ကွာ ပလိုက်တာ .. အသားမည်း လို့တဲ့။
ကျုပ်တော့ ပိုစ့်ပိုင်ရှင် ရဲ့ .. လူကြီးမိဘ တွေကို နဲနဲ အံ့ဩ မိတာပဲဗျို့…..
(စိတ်မဆိုး ပါနဲ့ဗျာ ………………………………………………….. ဆိုးလဲ တတ်နိုင်ဘူးဗျို့.)
နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်သူမပြုမိမိမှု ပါပဲ။
သင်ပြုသည့်ကံ ပဲ့တင်သံ သင့်ထံပြန်လာမည် ဆိုတာကိုးးးးးးးးးးး
ကျုပ်နဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ်တုန်းကျော်တုန်းက သူနဲ့ မပြတ်ခင်မှာ ကျုပ်က နယ်မြို့ကနေပြီးတော့ မြို့မှာ အလုပ်လုပ်တယ်။ ကျုပ် အကြောင်း သတင်းစုံစမ်းချင်လို့ ကျုပ်ပတ်ဝန်းကျင်က လူမှန်သမျှ လျှောက်မေးတယ်။ ကျုပ် အမှန်အတိုင်းပြောပြထားပေမဲ့ မယုံဘူး။ ကျုပ်ကို မပြောရဲတော့ ကျုပ်အသိုင်းအဝိုင်းက လူတွေကို လျှောက်ပြောပြီး ဆဲတယ်။ ရမ်းတယ်။ သူတို့လည်း ဒဏ်မခံနိုင်တော့ ဒီသတင်းတွေ ထွက်လာတယ်။ အဲဒီလို လုပ်တာ သူ့ မိသားစုတွေ သိတယ်။ ကျုပ်မိသားစုတွေလည်း သိသွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စကားများတော့ သူက မကျေနပ်လို့ မိသားစုချင်း စကားပြောမယ် ဆိုတော့ အားလုံး စုခေါ်ပြီး ကျုပ်နဲ့ အဲဒီ မိန်းမ နောက်ပြီး ကျုပ် ဘက်က လူကြီးတွေ သူဘက်က လူကြီးတွေလည်း ပါတာပေါ့။ အဲလိုမျိုးနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး အဖြေထုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီ ကတည်းက သူက ကျုပ်နဲ့ ဖြစ်ပြီးပြီ မို့ သူကို ယူရမယ်ပြောပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံ နဲ့ ကျုပ်စရိုက်နဲ့ သူစိတ်ဓါတ် အရမ်းကို ကွာခြားလွန်းလို့ မင်းနဲ့ ယူပြီးလည်း ကွဲရမှာပဲ ယူလိုက်ပြီးမှ ကွဲရင် မင်းလည်း တခုလပ် ဆိုတဲ့ နာမည် တခု ပိုသွားတာပဲ အဖတ်တင်မယ် မယူတာ ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ပြောလိုက်တော့ လူကြီးတွေကလည်း သဘောတူ လက်ခံသွားပါတယ်။ ဒီကိစ္စကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ အဲဒီ တုန်းကတည်းက ကျုပ်ဘက်က မှန်နေလို့ လူကြီးတွေက လက်လျော့ပြီး ဘာမှ မပြောတော့ပဲ ဒီအဖြေကို လက်ခံ ပေးလိုက်တာပါ။ သူလည်း လက်ခံ ပေးထားလို့ ၆နှစ်လောက် ငြိမ်နေပြီးမှ ပြန်ရောဂါ ထလာတာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်ကတည်းက ဖြစ်တာ ဆိုပေမဲ့ ၁ပတ်လောက် ရှုပ်ပြီးရင် သူဖုန်းကိုလည်း လက်ခံ စကားမပြောရင် ၃လလောက် ငြိမ်သွားတတ်ပါတယ်။ သူရောဂါက တခြား မဟုတ်ဘူး သူ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းက လူတွေ ကျုပ်မိသားစုနဲ့ တွေ့ဖို့ ရှိတယ် ဆိုရင် အဲဒီ ရောဂါ စတော့တာပါပဲ။ အဲဒီ လူ ပြန်သွားရင် ပြန်ငြိမ်သွားတတ်ပါတယ်။ ကျုပ် အမ နဲ့ သူ့ အမ က သူငယ်ချင်း ဆိုတာ ပြောထားပြီးသားမို့ သိပြီးသား ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
တလောက ကျုပ် အဘ ဘုန်းကြီးက အိမ်လာလည်တဲ့ အချိန် ကျုပ် ကောင်မလေး နဲ့ နှုတ်ဆက်ပေးရင်းနဲ့ ကောင်မလေးက အိမ်တော့ ဝယ်ပြီးပြီ နီးပါပြီ လို့ ပြောလိုက်တဲ့ စကား ကျုပ်အဘ ဘုန်းကြီးက တဆင့် သူ့ အကို ဘုန်းကြီး နားထဲ ရောက်ပြီး သူ့ နားထဲ ရောက်ပြီး အဲဒီ အိမ်ဘယ်မှာလဲ သတင်းလို်က်မေးနေတာပါ။
အရင်တုန်းက သူကိုပဲ ယူပါ လိုက်ပြောနေရာကနေပြီးတော့ အခုတော့ ၂ယောက်လုံး ယူရမယ် အဲလိုကြီး ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ် ကျော် ပြတ်ဆဲ ကတည်းက အဲဒီ မိန်းမ နဲ့ လုံးဝ မပတ်သတ်တော့တာ အမှန်ပါပဲ။ သူစိတ်ဓါတ် ကို လုံးဝ သဘောမကျလို့ အချင်းမများရအောင် တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ပါတယ်။